Iblisy - Wikipedia
Sary tao amin' ny soratanam-piraketana persana ao amin' ny Tantaran' i Tabari maneho an' i Iblisy mandà tsy hiankohoka amin' i Adama izay vao noarina
I Iblisy dia ny Devoly ao amin' ny fivavahana silamo. Atao hoe إبليس / Iblis izy amin' ny teny arabo. Ao amin' ny famoronana an' i Adama sy ny nampiankohofan' Andriamanitra azy eo anatrehan' i Adama no iresahana azy misimisy kokoa.
Nanda tsy hiankohoka eo anarehan' i Adama izy ka noroahina avy tany an-danitra. Izany fahalavoany izany no ampitahana azy amin' i Satana ao amin' ny fivavahana kristiana. Amin' ny lovantsofina silamo dia heverina ho i Seitana (al-Shaitan) ihany i Iblisy. Ny anarana hoe Seitana na Saitana anefa ampiasaina manokana hanondroana ny hery ratsy, fa i Iblisy kosa dia misahana anjara asa misabaka ao amin' ny finoana silamo.
Ny mombamomba an' i Iblisy[hanova | hanova ny fango]
Voatsiahy matetika ao amin' ny Kor'any ny anaran' i Iblisy, indrindra ao amin' ny soràta faha-15 sy faha-17 ary faha-38. Miseho matetika koa ny anarana hoe Seitana. I Iblisy no lehibe indrindra amin' ireo fanahy ratsy araka ny lovantsofina silamo. Indraindray izy dia everina ho anjely potraka, nefa indraindray koa ho jiny. I Iblisy no mahery indrindra amin' ny jiny sady lehiben' izy ireo.
Ny tsy fankaoavan' i Iblisy[hanova | hanova ny fango]
Nodidian' Andriamanitra mba hiankohoka eo anatrehan' i Adama ny anjely. Nandà izany i Iblisy ka noroahina hiala avy ao am-paradisa noho ny tsy fankatoavany an' Andriamanitra. Nangataka tamin' Andriamanitra izy mba ho afaka hanaporofo ny tsy fahamendrehan' ny olombelona. Noho ny tsy fanajàny an' Andriamanitra dia nozonin' Andriamanitra izy. Noroahina avy tany an-danitra izy ka nazera tany amin' ny fiainan-tsy hita. Nisy fifanarahana nataony tamin' Andriamanitra izay nahafahany naka fanahy ny olombelona mandra-pahatongan' ny fitsarana farany mba "hanozona mabdrakizay ny fahavalon' Andriamanitra". Isan' ny fahombiazana azon' i Iblisy voalohany ny nandavoany an' i Adama. Nahazo ny anarana hoe al-Shaytan ("demony") amin' izay izy.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Iblisy&oldid=1000920"
Voaova farany tamin'ny 30 Janoary 2021 amin'ny 04:21 ity pejy ity.